G oil-injected air compressors - Atlas Copco Thailand
ဆီအသုံးပြုပြီး လေထုတ်ပေးသော ကွန်ပရက်ဆာ
G-Series, ဆီအသုံးပြုပြီး လေထုတ်ပေးသော ကွန်ပရက်ဆာ
သင်၏ လိုအပ်ချက် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ, ကျွန်တော်တို့ Atlas Copco ၏ G-Series သည် 7.8 l/s မှ 1083 l/s အထိ , ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထုက်လုပ် ပေးနိုင် ပါသည်။
G (2-90 kW)
G VSD (55-75 kW)
အကြမ်းခံ Screw နည်းပညာ ကို အသုံးပြုထား‌‌‌သော‌‌‌‌ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် 100% အဆက်မပြတ်လည်ပါတ်နိုင်ခြင်း။ အကြမ်းခံ, ကြံ့ခိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်တပ်ဆင် ထားသော ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 46°C အထက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ Electroလေဖိအားသုံး inlet valve ကို အသုံးပြုထား‌‌‌သော‌‌‌‌ကြောင့် တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်ခြင်း, သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ကြိုးမဲ့ ဒီဇိုင်း (သို့) ဝါယာရိန်း သွယ်တန်းခြင်း ‌‌‌‌‌‌ ။ (ကွန်ပရက်ဆာ(Floor Type), ကွန်ပရက်ဆာ နှင့် ‌လေတိုင်ကီတွဲရက်(Tank Mounted Type ) တို့ကို အခြောက်ခံစက် နှင့် တွဲရက် (သို့) အခြောက်ခံစက်မပါ တပ်ဆင်ထားသော) အပြည့်အဝ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေရန်အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိခြင်း။ စက်အတွက်နေရာအနည်းအငယ်ပေးရခြင်း နှင့် အပေါ်မှအအေးဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို နံရံတစ်ခု၌ကပ်၍ သို့မဟုတ် ထောင့်တစ်နေရာ၌ ထားရှိနိုင်ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ Atlas Copco ၏ G Series Compressor ကို ၀ယ် မည် ဆိုပါက စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရုံသာမက သင့်အား ထူးခြားသော ရေရှည်တည်တံ့မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆောင်ကျဉ်း ပေးပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် သင့်လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော လေပမာဏ ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ထုက်လုပ်ပေးပါသည်။ အဆိုးရွားဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်၌ပင် လုပ်ဆောင်နှိင်ရန် တည်ဆောက် ထားသည့် အတွက် သင်၏ထုတ်လုပ်မှုကို ထိရောက်စွာ လည်ပတ်စေ နိုင်ပါသည်။
Oil-Injected rotary screw compressors G15L22 (15-22kW / 20-23 hp)
Oil-Injected rotary screw compressors G15L22 1.8 MB
We introduce to you the latest professional oil injected screw compressor from Atlas Copco, the G7-15. These compressors are available in 7, 11 and 15 kW unit. There are some nice advances with this new compressor line up.
Air compressors 2019 Air and gas treatment Oil-lubricated compressors